हर्कबहादुरका बढिया भाले | Epradesh Today
Homeफिचरहर्कबहादुरका बढिया भाले
वार्षिक करिब १० लाख आम्दानी
‘युवा अवस्थाको उमेर तर बेरोजगार, कि विदेश पलायन हुन प¥यो, कि त स्वदेशमा केही व्यवसाय गर्नपर्ने भयो, स्वदेशमा फेरी के व्यवसाय गर्ने त ? फेरी व्यवसाय गर्न पनि सजिलो पनि त हुँदैन् ? तर नगरी पनि नहुने फेरी’ हर्कबहादुर चौधरीको मनमा यी कुराले केही दिन त डेरा जमाईरह्यो , अरुले गरेको व्यवसायको आफूले नक्कल गर्दा चुनौतिको सामना पनि त धेरै भोग्नुपर्छ– हर्कबहादुरलाई यो पनि थाहा थियो । मैले केही फरक व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेर हर्कबहादुरले शुरुमा स्थानीय साकीनी जातका कुखुरा पाल्ने सोच बनाए । कुखुराका लागि आवश्यक पर्ने सबै भौतिक सामाग्री निर्माण गरे, र कुखुरा पाल्न शुरु गरे । करिब ८ लाखको लगानीबाट स्थानीय साकिनी जातका कुखुराको व्यवसाय शुरु गरेका उनले दुई वर्षसम्म व्यवसाय त गरे तर फाइदाको साटो नोक्सानी व्यहोर्नु प¥यो उनले ।
तर पनि हर्कबहादुर कि गाँठले खान्छ कि आँटले खान्छ भन्ने नेपाली उखान सम्झदैँ निरास नभई हर्कबहादुर आफ्नो व्यवसायबाट नोक्सानी व्यहोर्दासमेत पनि पछाडि फर्केनन्, अगाडि बढिरहे उनी । अगाडि बढ्नका लागि विभिन्न चुनौतीको सामना गरेपनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन्छु भन्ने अठोट बोकेका उनले फेरी नयाँ सोच बोके र व्यवसाय गरेको दुई वर्षमै ठूलो क्षति व्यहोरेका हर्कबहादुरसँग लगानी थिएन् र पनि उनले हरेस खाएनन् । कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर फरक ढंगले भनेर फेरी उनले भएका जग्गा तथा सम्पत्ति सबै बैंकमा धितो राखेर ऋण निकाल्ने सोच बनाए ।
बैंकले पनि हर्कबहादुरले भने जसरी ऋण दियो, त्यही समयमा उनी काठमाडौँ जानुपर्ने भयो । काठमाडाँै गएको समयमा एक जनासँग भेट भयो, भेटको क्रममा कुराकानीको संवादको क्रममा घर कहाँ हो ? भनेर प्रश्न गरेपछि उनले दाङ हो भन्ने जवाफ दिए , लगत्तै उसले हर्कबहादुरलाई भन्यो ए… त्यहाँ त बढिया भाले पाईन्छ नि । त्यतिबेलासम्म उनले बढिया भाले पाल्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका थिएनन् । नयाँ भर्खर भेट भएको मानिसले उक्त अभिव्यक्ति दिएपछि आफूलाई लौ अब यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सोच आएको उनले बताए । उनले भने– काठमाडौँ नगएको भए म अरु कुनै पेशा व्यवसायमा हुन्थे, अथवा विदेशमा हुन्थेँ होला सायद । काठमाडौँमा केही जानकारी पाएपछि मलाई पनि केही आशा पलायो र फरक जस्तो पनि लाग्यो । मैले दाङमा अब यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निधो गरेँ । एउटा कामले काठमाडौँ गएको हर्कबहादुरलाई नुन ल्याउन गएको सुन भेटिएको जस्तै भयो ।
मैले दाङमा अब यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निधो गरेँ । एउटा कामले काठमाडौँ गएको हर्कबहादुरलाई नुन ल्याउन गएको सुन भेटिएको जस्तै भयो ।
त्यसपछि नयाँ सोच बोकेर घर फर्केका उनले पुरानै स्थानीय कुखुरा पालेको खोरमा बढिया भाले पाल्न शुरु गरे । लगानी गरेको लामो समयपछि उत्पादन पाउने भएपनि आफ्नो व्यवसायमा सन्तोष रहेको उनले बताए । मैले वर्षमा करिब २ हजार जति बिक्री गर्न लक्ष्य राखेको थिए तर हिजोआज बिना प्रचार पाँच हजार बढिया भाले बिक्री गरिरहेको छु– उनले भने । हर्कबहादुरलाई कसरी कहाँ बेच्ने समस्या भन्दा भनेको समयमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन नसक्ने चिन्ताले सताउने गर्दछ । वार्षिक रुपमा करिब ५ देखि १० लाख आम्दानी गर्ने गरेको बताउँदै उनले घर परिवारका तीनजनाले पनि रोजगारी पाएको बताए ।
हरेक चुनौतिको सामना गर्न सक्यो भने सफलता एकदिन आफ्नै पोल्टामा पार्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण दिएका हर्कबहादुरले वर्षमा दुई पटक मात्रै आफ्नो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने गरेका छन् । बढिया भालेको माग जिल्लाभित्र भन्दा पनि दाङ बाहिर बुटवल, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा अत्याधिक खपत हुने गरेको उनले बताए । बजारीकरणमा कुनै समस्या छैन् तर माग अनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन् उनले भने । पछिल्लो समय जिल्लाभित्र पनि खपत हुन थालेको भन्दै उनले जिल्ला बाहिरका ग्राहक खरिदका लागि आफ्नो फर्मसम्म नै आउने गरेको उनले बताए । घोराही उपमहानगरपालिका–१३ बडहरामा दंगाली पोल्ट्र फर्ममार्फत बढिया भालेको व्यवसाय सञ्चालन गरेका हर्कबहादुरलाई आफै पनि बढिया बनाउन आउँछ तर फुर्सद नभएका कारण पशु सेवा कार्यालयको सहायतामा बढिया भाले उत्पादन गर्ने गरिएको उनले बताए । मेहनत र परिश्रमसँगै चुनौतिको सामना गर्दै अघि बढेको उनको अनुभव छ । आठ लाखबाट व्यवसाय शुरुवात गरेका उनको अहिले करिब ३५ लाखको लगानी पुगेको छ ।